အမေရိကန်အီလက်ထရောနစ် DV ထီ Form ကိုအခမဲ့စမ်းသပ် (အစိမ်းရောင်ကဒ်)
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဒီတရားဝင် DV ထီလျှောက်လွှာပုံစံကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝမိတ္တူဖြစ်ပါတယ်။ သာလေ့ကျင့်ဘို့သုံးပါ။ သငျသညျကထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖွင့်လှစ်သည့်အခါအဆိုပါအရာရှိကက်ဘ်ဆိုက် www.dvlottery.state.gov အပေါ်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးလယ်ကွင်းသာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့ရပါမည်။ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြီးနောက်ဤပုံစံ English သို့ဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူအစစ်အမှန် DV ထီလျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
လက်ထရွန်းနစ်ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားနိုင်ရန် VISA entry ပုံစံ Form ကို: DS-5501 (DV-2021 တည်းဖြတ်မူ)
သာလျှင်မွေးဖွားခြင်းစီးတီးရိုက်ထည့်ပါ။ ခရိုင် / ကောင်တီ / ခရိုင် / ပြည်နယ်ရိုက်ထည့်မထားပါနဲ့။
အရည်အချင်းပြည့်မီသင်၏တိုင်းပြည်ပုံမှန်အားမွေးသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသင်၏တိုင်းပြည်သင်သည်အသက်ရှင်ဘယ်မှာမှဆက်စပ်မဟုတ်ပါ။ သင် DV အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ကြပါလျှင်, သင့်အမှု၌ရရှိနိုင်အခြားရွေးချယ်စရာရှိလြှငျကြည့်ဖို့စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝ၏နိုင်ငံ၏ရှင်းလင်းချက်ကိုသွားပါ။
Diversity Visa အစီအစဉ်အတွက်တင်သွင်းရန်အတွက်သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်မပြုပါကသင်လက်ရှိနေထိုင်သောနိုင်ငံမှတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ A သို့မဟုတ် B. ကိုဖြေပါ။
ထုတ်ပေးသည့်နိုင်ငံ / အာဏာပိုင်
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရရှိဘဲနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ချက်ကိုတစ် ဦး ချင်းစွန့်ခွာ။ အမိမြေလုံခြုံရေးအတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး
အကယ်၍ နောင်တွင်ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ချက်မှကင်းလွတ်ခွင့်မရဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Diversity Visa အစီအစဉ်မှအရည်အချင်းမပြည့်မှီကြောင်းနားလည်ပါသည်။
8. တွေဟာလည်းပုံ Photograph
ဓာတ်ပုံတွေ eDV entry ကို၏အချိန်မှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံများ, ဓာတ်ပုံများ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လက်မခံနိုင်နောက်ခံ recency ဖို့ကန့်သတ်, ရှိသမျှသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာအပါအဝင်သော်လည်းမမဓာတ်ပုံတွေတစ်ခုလုံးကို entry ကို၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီဘို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါမျက်နှာသွင်ပြင်လက္ခဏာများပွောငျးလဲကြောင်းဓာတ်ပုံတွေမဆိုကိုင်တွယ်တစ်ခုလုံးကို entry ကို၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီဘို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဥပမာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဥပမာကိုကြည့်ပါ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ကိုအဘို့အ Composite စသတ်မှတ်ချက်များများအတွက် 2020 မတူကွဲပြားခြင်းပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာအစီအစဉ် (DV-2020) အတွက်ညွှန်ကြားချက်များသွားရောက်ဖတ်ရှုပါ။
သငျသညျ eDV ထဲသို့ image ကိုရိုက်ထည့်ရန်အောက်ပါနည်းလမ်းများ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ်:
တစ်ဦးတင်သွင်းဓာတ်ပုံ scan လုပ်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်နာကိုသုံးပါ။
ဓာတ်ပုံညွှန်ကြားချက်များ / ဓာတ်ပုံဥပမာစာမျက်နှာ Link ကို
ခလုတ်ကိုသင်တို့အဘို့ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံသိုလှောင်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် '' နယူးဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ '' ကိုနှိပ်ခြင်း။ ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖိုင်ကိုအမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံမှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, ဖိုင်အသစ်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့ button ကို '' နယူးဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ '' ကို click ပါ။
9. mail လိပ်စာ
တစ်ဦး။ (optional) ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်
ခ။ လိပ်စာစာကြောင်း 1
က c ။ လိပ်စာလိုင်း2(optional)
ဃ။ မြို့တော် / မြို့
အီး။ ခရိုင် / ကောင်တီ / ခရိုင် / ပြည်နယ်
f ။ စာပို့သင်္ကေတ / ဇစ်ကုဒ်
အဘယ်သူမျှမစာတိုက်ကုဒ် / ဇစ်ကုဒ်
ဆ။ ပြည် တစ်ဦးကနိုင်ငံရွေးပါ ...
12. E-mail ကိုလိပ်စာ
တစ်ဦး။ အီးမေးလိပ်စာ (ဥပမာ, johndoe@example.com)
13. သင်တို့သည်ယနေ့၏အဖြစ်, အောင်မြင်ပါပြီပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိကဘာလဲ?
High School တွင်မျှဒီဂရီ
High School တွင်ဒီဂရီ
သငျသညျ (လေ့လာမှုတစ်ခုအပြည့်အဝသင်တန်းပြီးစီးထင်ဟပ်အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာတစ်ဦးအနည်းဆုံးရှိ (အလုပ်အကိုင်ကျောင်းများတွင်သို့မဟုတ်တခုတော့ဒီဂရီလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်) သို့မဟုတ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လိုအပ်သည်တစ်ခုသိမ်းပိုက်အတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြစ်ရမည် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ငျြးပွညျ့မီလျှင်တစ်ဦးမတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအတွက်) ကြည့်ရှုရန် http://www.onetonline.org/ သွားရောက်ကြည့်ရှု။
လက်ထပ်နှင့်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦး U.S.citizen သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားဝင်ဖြစ်သောအမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ် (LPR) မဟုတ်ပါ
လက်ထပ်နှင့်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦး U.S.citizen သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားဝင်ဖြစ်သောအမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ် (LPR) IS
ဥပဒေရေးရာခွဲခြာစုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးကိုတရားရုံးအမိန့်ကိုအောက်ပါ, လက်ထပ်ရှိနေဆဲပေမယ့်ဆိတျကှနထေိုငျသညျ့အခါတစ်ဦးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တရားဝင်ကွဲကွာနေတယ်ဆိုရင်, သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာမတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအစီအစဉ်ဖြင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ သင်တရားဝင်ကွဲကွာနေကြဘယ်သူကိုကနေအိမ်ထောင်ဖက်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ရွေးချယ်လျှင်သင်အပြစ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျတရားဝင်တရားရုံးအမိန့်ဖြင့်ခွဲခြားမထားလျှင်, သင်သင်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာလျှောက်ထားမတိုင်မီကွာရှင်းခံရဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ပင်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီအိမ်ထောင်ဖက်စာရင်းပြုစုရန်ပျက်ကွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီဘို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများတစ်ကိုယ်ရေဖြစ်ကြောင်းနှင့်နေ့စွဲအပေါ် 21 နှစ်အောက်သင်သည်သင်၏ entry ကိုတင်ပြသူအပေါင်းတို့သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသားသမီး, တရားဝင်မွေးစားကလေးများနှင့် stepchildren ပါဝင်သည်။ သငျသညျသူတို့သည်သင်၏ဆင်းသက်လာအဖြစ်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာလျှောက်ထားရန်ရည်ရွယ်ကြဘူးတယ်ဆိုရင်သူတို့သင်နှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်, ရှိသမျှအရည်အချင်းပြည့်မီကလေးများပါဝင်ရမည်။ အားလုံးရထိုက်ခွင့်ကလေးများစာရင်းပြုစုရန်ပျက်ကွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီဘို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးသည်တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်သောအမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ်သည်ဆိုပါက, သင့် entry ကိုသူ့ကိုသူ / သူမ၏စာရင်းပြုစုကြပါဘူး။
ဆာဗာအမှားတစ်ခု,5မိနစ် re-ကြိုးစားကြည့်ပါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။